दश बर्ष पछी को मेरो गाउँ
Homevillegeदश बर्ष पछी को मेरो गाउँ
mskhanal 11:04 PM
पढाईको लागि घरछोडेपछी पहिलो पटक जेठमहिना मा घरमा बस्ने मौकामिल्यो। दशै बिदाबाहेक अरु समयमा घर माबस्ने मौका निकैकाम मात्र मिल्नेगर्दछ। यस्तो मा लग्भग१० बर्ष पछीजेठ महिना माघर मा आउनेमौका मिल्यो। योबसाइ कती कुराले अत्यन्तै रमाइलोभयो भने कतिपयकुरा ले भनेप्रितीकर रहेन।
कुरासंबिधान सभा बाटनै सुरु गर्दछु।२०६४ को चैत्र।गते त ठ्याक्कैयाद छैन तरत्यतिबेला घर आउँदाको एक एकपल मेरो दिमागमा अझै पनिताजा छन। द्वन्दको समाप्ती पछीमाओबादी बाहेक अन्य राजनीतिकशक्ती को प्रतिनिधिबनेर गाउँ माप्रबेश गर्ने शायद पहिलोब्यक्ती म थिएँ।चुनाव ताका भएकाएक एक पलमलाई अझै पनियाद छन रत्यस को चर्चायस भन्दा पहिलेको पोस्ट मापनि गरेको छु।त्यस तर्फ अहिलेम लाग्दिन। अहिलेको यात्रा भनेठीक संबिधान सभाबिगठन पछी भयो।त्यस अर्थ मामेरो यात्रा अझस्मरणिय बन्न पुग्यो।संयोग भनौ किके भनौ त्यतीबेला चुनाव कोबेला म सँगराजनीतिक झन्डा बोकेर हिंडेकीसानी बहिनी योपटक पनि मसङ्गैभएको अवस्था थियो।त्यसैले पनि मलाईयो यात्रा बिशेषमहत्व को हुनपुगेको थियो।
चारबर्ष मा गाउँमा भएका जनताको राजनीतिक दलप्रती को आस्थार विश्वाश मज्जालेटुटेको देखेँ। हिजो कासबै बिचार टुटेर अब राजाआउनु पर्छ भन्नेबिचार लेबलियो सँग जरागाडेको भेटियो। कुनै निरंकुशसासक आए पनिस्विकार गर्ने तर पुरानापार्टी लाई समर्थननगर्ने भनेरभन्ने मान्छे धेरैभेटिए। तर संबिधानसभा बिगठन कोप्रमुख कारण बनेकोसंघियता र जातियराजनीति प्रती भने नत कसैलाई राम्रोसँग जानकारी थियोन त चासोनै। त्यस्ले कम्तीमा हाम्रो राजनीतिकती सतही रहेछभन्ने कुरा बुझ्नमलाई गार्हो परेन।
योबसाइ मा मैलेदेखेको अर्को कुरा गाउँबासीको जीवनशैली माआएको परिवर्तन हो।दसैं या अन्यबेला मा सबैबाहिर गएका हरुसमेत फर्केकोबेला हुन्छ। त्योबेला गाउँ कोअवस्था स्वभावत परिवर्तन हुन्छ।तर अहिले योबेला फाट्टफुट्ट मात्रामानिस घर फर्केकाहुन्छन। यती बेलाजे हुन्छ त्योगाउँ को नियमितजीवनशैली हुन्छ। त्यसैले पनिमैले गाउँ कोजीवनशैली बुझ्ने प्रयास गरेकोथिएँ। त्यसक्रम माभेटिएका परिवर्तन अचम्म लाग्दाभेटिए। पहिले म स्कुलको विद्यार्थी हुँदाको कुरा सम्झिन्छु।त्यती बेला गर्मीहुँदा दही महीर सर्वत बनाएरखाने चलन थियो।सर्वत बनाउँदा कागतीया स्थानिय भकिम्लो(जस्लाई अर्घाखाँची बाहिर केभनिन्छ मलाई थाहाछैन र मैलेअर्घाखाँची बाहिर देखेको पनिछैन )को प्रयोगहुन्थ्यो। भकिम्लो को सर्वतमलाई निकै नैमन पर्ने पेयसमेत हो त्यसैलेत्यो पिउने मेरोनिकै चाहना थियोतर अहिले भकिम्लोदेख्नु त कताहो कता सर्वतबनाउने चलन समेतहराएछ। सर्वत को स्थानअहिले फ्रूटी, रियल, कोक जस्ता पेयले लिएछन। खाजासमेत स्थानिय स्तरमा बनाउन सकिनेसामाग्री भन्दा चाउ चाउले प्राथमिकता पाएछ।धन्य रेमिट्यान्स.
अर्कोनमिठो अनुभब रह्योफूल को। पोहोरसाल दशै तिहारताका गाउँ माफूल को अभाबभएर बुटवल बाटझिकाएको त मलाईयाद थियो। तरत्यस को प्रमुखकारण मलाई थाहाथिएन। अहिले भनेत्यस को कारणमज्जाले थाहा भएकोछ। हामी केटाकेटीहुँदा मलाई यादछ हाम्रो फूलरोप्ने समेत प्रतिस्पर्धाहुन्थ्यो। कस्को घर माकती जात कोफूल भन्ने प्रसँगनिकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेगर्थ्यो। तर अहिलेको पुस्ता मान त त्योफूल रोप्ने जागरछ न त समय नैत्यस्तो छ। जलबायुपरिवर्तन को असारहोला शायद पानीपर्ने क्रम अहिलेनिकै ढिलो सुरुहुँदै छ। त्यस्कोप्रभाब भने नराम्रोसँग परेको भेटिन्छ।पानीका मुल सुकेकाछन पानी कोहाहाकार छ। त्यस्कोप्रभाब हो यतीबेला उम्रिनु पर्नेकुनै पनि बिरुवाहरु उम्रिएका छैनन।त्यस्को प्रभाब दसैं तिहारमा फूल कोसंकट को रुपमा देखा पर्नेनिस्चित छ। धनीर ठुला देशले गर्ने कर्तुतको प्रभाब हामीलेमनाउने चाड मापनि पर्न थालेकोछ।
सबै कुरा हरु परिवर्तनशिल हुन्छन। शायद मेरो गाउँ पनि १० बर्ष मा त्यस्तै परिवर्तन देख्यो। जस्लाई म प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन। तर अन्य कुरा मा जती परिवर्तन आए पनि चेतना स्तर मा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। उही पुरानो यान्त्रिक जीवनशैली पहिले जस्तै चलेकै छ। सामान्य जीवन बाच्ने अरु केही सपना हरु देखिन्न। शायद त्यसैले नै होला नेपाल र नेपाली को जीवन सुखी मानिने। सुखी जीवन को लागि त त्यो ठीक होला तर बिकास र प्रगती को लागि भने यो बाधक नै बन्ने देखिन्छ।
(मनमा लागेका कुरालेख्दा सिलसिला मिलेको छैन।निचोड कसरी लेख्नेभनेर आफैले निर्णयगर्न सकिन। गाउँको ऐना कोरुप मा योलेख राख्न मात्रखोजेको छु।)
Basant Giri June 15, 2012 at 12:18 AM
Dang, Pyuthan tira pani bhakimlo prayog gareko malai thaha chha.
mskhanal June 15, 2012 at 7:20 AM
भकिम्लो लाई बाहिर के भन्छन बसन्त जी ? भकिम्लो नै भन्छन कि अरु नै कुनै नाम छ?
Unknown June 17, 2012 at 3:53 PM
Hamro ma ne chunaw taakaa dashain aaye jasto vaatheo hehehe, jana yeudda ma ta gaam mae vogayko mailay, teti bela maoist haru jatiyo ta thaa vayena bargiya kura gareko ajhai yadd xa... Hamro baba ne rajamo(npf) ko samrthak hunuhuntheo, baba lai party ma lagna paro vanera dherai maoist neta dhauthay #mailay dekhekaa maoist